भाइरल कम्युनिस्ट मेयरका थामिनसक्नु झूठा विवरणको पर्दाफास, पूर्वमा उथलपुथल !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
भाइरल कम्युनिस्ट मेयरका थामिनसक्नु झूठा विवरणको पर्दाफास, पूर्वमा उथलपुथल !
काठमाडौं – पत्रकार र पत्रकारितालाई गाली गलौजमात्र होइन धम्की समेत दिएर भाइरल बनेका इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीका थामिनसक्नु झूठा विवरणहरू रहेको खुलेको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलता अपनाउने घोषणा गरे, भ्रष्टाचारीलाई कालोमोसो दल्ने, सडक मिच्नेलाई जनकारबाही गर्ने जस्ता कठोर शव्द बोली पत्रकारको नाकको डाँडी भाच्न एक करोडको घडेरी छुट्याएकोसम्म बताउने चौधरीका कर्तुत विस्तारै खुल्न थालेका हुन् । आजको जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छापिएको छ ।
यता, इटहरी उपमहानगरपालिकाले ५ लाखभन्दा बढीको एउटै आयोजनालाई टुक्राएर कोटेसनमार्फत विानप्रतिस्पर्धा गराएको काम पनि उनले सदर गरेको भेटिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा मेयर भवन बनाउने निर्णयलाई ०७४ असारपछि जिम्मेवारी सम्हालेपछि सदर गरे ।
गाह्रो नलगाइकन आल्मुनियम पार्टेसन गरेर बनाइएको यो एकतल्ले छाप्राको कुल लागत उपमहानगरपालिकाको रेकर्ड अनुसार ३३ लाख ५ हजार ३४० रुपैयाँ परेको छ । तर, ३३ लाखको भवन निर्माण गर्दा टेण्डर जारी गरिएन । बरु प्रतिस्पर्धालाई छल्नका लागि ५ लाखभन्दा मुनिका विभिन्न ८ वटा टुक्रामा विभाजन गरेर कोटेसनमार्फत काम गराइयो । एउटा छाप्रो बनाउन बेग्लाबेग्लै ८ वटा टेकेदार कम्पनीहरु खटे ।
कसेले चर्पी बनाए, कसैले जग हाल, कसैले झ्याल बनाए त कसैले रंग लगाए । यसरी विना प्रतिस्पर्धा कोटेसनबाटै ३३ लाख रुपैयाँ लागत देखाइयो । मेयर भवनमा रंग लगाउन इनरुवाको कुशल निर्माण सेवालाई ४ लाख ८ हजारमा जिम्मा दिइयो । झ्याल ढोकाका लागि धरानको मुनाल कन्स्ट्रसनलाई ४ लाख ९२ हजारमा दिइयो । मेयर भवनको प्रि–फ्याबका लागि कोशी गाउँपालिकाको बाबा बुदेश निर्माण सेवालाई ४ लाख ९६ हजारमा ठेक्का दिइयो ।